» प्रमाण हुँदा पनि कसरी धरौटीमा छुटे कृष्णबहादुर गिरी ‘सिद्धबाबा’?
प्रमाण हुँदा पनि कसरी धरौटीमा छुटे कृष्णबहादुर गिरी ‘सिद्धबाबा’?
१५ पुष २०७६, मंगलवार ०६:२१
आफ्नै महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कृष्णबहादुर गिरी ‘सिद्धबाबा’ लाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सोमबार धरौटीमा छोड्न आदेश दियो।
दुई दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलाशले गिरीलाई तीन लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। सिद्दबाबालाई पुर्पक्षको लागि कारागार पठाउने अनुमानमा प्रायस् वकिलहरु थिए। तर पुर्पक्षका लागि पठाउने आवश्यक प्रमाण नभएको बताउँदै पीडितको तर्फका अधिवक्ताहरुको माग दाबीलाई न्यायाधीशले अस्वीकार गरेका थिए। खासमा सिद्दबाबालाई बलत्कारको आरोप लगाउँदाको सुरुवाती प्रमाण प्रहरीसँग दिएको जाहेरी मात्रै थियो। स्रोतबाट प्राप्त मिसिलमा जाहेरी अनुसारको स्वास्थ्य रिपोर्टले बलात्कार गरेको देखिँदैन थियो।
बलत्कार भएको लामो समयपछि मात्र जाहेरी दिएकोले स्वास्थ्य रिपोर्टबाट बलात्कार भएको प्रमाण पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा प्रहरी र सरकारी वकिलले सक्दैन थियो। अनुसन्धानको क्रममा एक टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत एउटा अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भयो। जुन फोन रेकर्डमा सिद्दबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीले पीडित महिलासँग माफ मागेको आवाज थियो। रेकर्ड आएपछि अनुसन्धानमा एउटा गतिलो प्रमाणकारुपमा अनुसन्धानकर्तासँग आयो।
अनुसन्धान राम्ररी नगरेको आरोप प्रहरीलाई सुरुदेखि नै लाग्दै आएको थियो। पीडित महिलालेसमेत प्रहरीले आफैँलाई फसाउन लागेको भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालय गएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अडियोलाई समेत प्रमाणका रुपमा अनुसन्धान गर्न दवाब दिएको थियो। प्रहरीले १४ दिन अनुसन्धान गरिसकेर सरकारी वकिलमार्फत् अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारि गरेको थियो। तर प्रहरीले ९मिसिल० बुझाए पनि अनुसन्धान अझै बाँकी रहेको भन्दै सरकारी वकिलमार्फत् म्याद थप गरेर थप प्रमाण संकलनमा लागेको थियो।